IBhabheli isayina izivumelwano ezitsha zokuzisa ubomi obulawulwa lihlabathi kuma-350k, kubandakanya ne-250k yexabiso lokuphila ngononophelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IBhabheli isayina izivumelwano ezitsha zokuzisa ubomi obulawulwa lihlabathi kuma-350k, kubandakanya ne-250k yexabiso lokuphila ngononophelo
I-Bhabhiloni namhlanje icacise amandla ayo aqhubekayo, evakalisa enye c. 135k ubomi buya kuba nakho ukufikelela kukhathalelo lwexabiso-based kulo lonke elase-US nase-UK ngokwandiswa kwalo ukuya kumanye amazwe ase-US, iGeorgia neMississippi, kunye nokukhula okuthe kratya eCalifornia. Oku kuthetha ukuba ngokudibanisa imodeli yokhathalelo olusekwe kwixabiso, iBhabheli 360 kunye nomsebenzi wayo kukhathalelo oluphambili, iBhabheli iya kuba ilawula c. Ama-350k aphila kwihlabathi jikelele, kubandakanya i-105k ye-NHS GP e-Hand lives, ekuqaleni kuka-2022.
"Ukwanda komsebenzi wethu kuya kunceda iBhabheli iqhubele phambili injongo yethu yokufikelela kuluntu apho ukufikelela kunye nokufikeleleka kuyimiqobo, ukuze senze ukulingana kwezempilo kube yinto eqhelekileyo," utshilo uMsunguli kunye neCEO yaseBhabheli u-Ali Parsa. "Ukukhula kwethu kukhathalelo olusekwe kwixabiso kuqhubeka kubonisa ukulungelwa kwemodeli yethu yedijithali-yokuqala, ekhula phambi kwesicwangciso, ngalo lonke elixa sigcina ukhathalelo lwempilo olukumgangatho ophezulu."
IBhabheli iyakonyusa inani labantu baseMelika abasebenza ngenkqubo yokhathalelo olusekwe kwixabiso kunye nokongezwa kwama-63k ahlala eGeorgia naseMississippi, njengakumhla wesivumelwano. Oku kuyakongezwa ngakumbi ngabantu abali-17k abahlala eCalifornia ekuqaleni kowama-2022. Oku kuyakuthetha ukuba ezi zigulana zeMedicaid kunye neMedicare ziyakudlula ekufumaneni ukufikelela koogqirha nakubongikazi abangama-24/7, amandla okufumana ulwazi kunye nenkxaso, kunye Ukuphela kukhathalelo lokugqibela, ngenjongo yokukhokelela kwiziphumo ezingcono kunye neendleko eziphantsi ngokuhamba kwexesha.
Ulwandiso lwamva nje lwaseMelika luzalisa ukukhula kweBhabheli kwihlabathi liphela, kunye nobomi obungaphezulu kwama-55K obongezwe kutshanje e-UK ngentsebenziswano yakhe neRoyal Wolverhampton NHS Trust ngaphezulu kwe-105k yobomi ngokuziqhelanisa ne-NHS GP Practice, eBhabhiloni GP eSandleni. Ukwandiswa kwehlabathi i-Bhabheli 360 kuyaqhubeka kuseka umbutho njengenkokheli kwidijithali-yokuqala, ukhathalelo olusekwe kwixabiso, ehambelana nomsebenzi wokuseka inkampani ukubonelela ngononophelo lwempilo olufikelelekayo nolufikelelekayo kuye wonke umntu emhlabeni. I-Bhabhiloni yenze ubunjineli kwakhona ngendlela yokhathalelo lwempilo ehanjiswa ngemodeli eyoyikekayo ejolise ekulondolozeni impilo yabantu, ishenxela kwimodeli yentlawulo yenkonzo egxile ekuguleni nakwintlekele.
Imbalasane yobomi be-350K egutyungelwe kwihlabathi liphela iza kwindawo yeBhabheli, kunye nengxelo yayo yomvuzo eyi-H1 2021 ichaza i-472% yonyaka yonyaka yengeniso, kunye nokudityaniswa kwe- $ 4.2B ye-SPAC kunye neAlkuri Global Acquisition Corp. elungiselelwe ukuvalwa kungekudala . Njengenkampani ethengisa esidlangalaleni, iBhabheli ilindele ukubekwa kwindawo yokwakha kwi-traction esele ifezekisile kwaye iqhubeke nomfutho ngokwenza imisebenzi ngokukhawuleza.